Buy May Inya Condo For Rent (ID-673) in Mayangone on ipivi.com
May Inya Condo For Rent (ID-673)
Active on site: 47 days
Views: 142 (+1)
May Inya Condo for rent in Mayangone Township, near Micasa Hotel. Living area - 1060 sqft , organized by Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo.
Asking Price - 3500 USD (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ မီကာဆာ ဟိုတယ်အနီးရှိ ငှားရန် မေ အင်းယားကွန်ဒို ဖြစ်ပါသည်။ ၁၀၆၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအစုံအလင် ထည့်သွင်းပါရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရန်ရှိသော မေ အင်းယားကွန်ဒို (ID-673)
Name: May Inya Condo For Rent (ID-673)
Active on site 47 days